Ciidanka Xoogga Oo Fashiliyay Qaraxyo Lala Damacsanaa Taliyaha Ciidanka Xooga Dalka – Al-Hurriyah
Ciidanka Xoogga Oo Fashiliyay Qaraxyo Lala Damacsanaa Taliyaha Ciidanka Xooga Dalka
Dowladda somaaliya ayaa shaacisay in ciidanmada milatariga ee ka howlgala degaanka janaale ay ka hortageen weeraro Al-shabaab ay ku qaadeen kolonyo uu la socday taliyaha ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed sareeye guudto Odowaa Yuusuf Raage.
Hadalka ka soo baxay taliska ciidanka xooga somaaliyeed ayaa lagu sheegay in qaraxyada lagu weeraray kolonyadaasi lagu soo xiray labo neef oo Lo,ah, islamarkaasina la doonayay in lagu dhibaateeyo ciidanka xoogga dalka.
Sidoo kale taliska ayaa sheegay in weerarkaasi ay si weyn uga hortageen ciidanka xooga dalka, islamarkaasina la fashiliyay.
Dadka degaanka qaarkood oo aanu la xiriirnay ayaa sheegay in qaraxyadaasi ayasan geysan wax khasaaro ah laakiin laga maqalay jugata qaraxyadaasi janaale .
Dhinaca kale al-shabaab oo sheegatay mas,uuliyada weeraradaasi ayaa sheegay in uu si dirqi ah weeraradaasi uga badbaaday taliyaha ciidanka xooga dalka sareeye guudto odawaa yuusuf raage oo ay sheegeen in ay la damacsanaayeen qaraxyadaasi .
Janaale ayaa ka mid ah deegaanadii dhowaan lagala wareegay Xarakada Al-Shabaab, waxaana haatan abaabul iyo dhaq dhaqaaq xoogan ka wada ka wada taliye Odowaa.
Si kastaba ha’ahaatee ma’ahan markii ugu horreysay oo ciidamada dowladda ay sheegaan in ay fashiliyaan weeraro ka imaan lahaa Al-Shabaab, waxaana howlgallo baaritaano ah ay ka wadaan qeybo ka mid ah koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya.
Degmada Buulo-Burde ee Gobolka Hiiraan waxaa kulan aan caadi ahayn ku yeeshay,saraakiisha Ciidamada…
Somaaliland Oo Sheegaty in Mashariic Lagu Cunayo Jabahadaha looga Dhaqay Buuhoodle
Magaalada buuhoodle waxaa looga dhawaaqay shalay jabhad la magac baxday SSC,kuwaas oo sheegay inay…
Taliyaha Ciidanka Booliska Soomaaliyeed Janeraal; Cabdi Xasan Maxamed (Xijaar), ayaa Saciid Cali…
Barlamaanka Dowlad Goboleedka Koonfur Galbeed ayaa muddo kordhin hal sano ah u sameeyay Madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed C/casiis Laftagareen. 87 xildhibaan oo maanta kulanka soo xaadirtay ayaa si gacan taag ah isugu raacay in muddo xileedka Madaxweynaha…
Wasiirka caafimaadka oo sheegtay in dowladdu ay ku howlantahay inay dalka kusoo celiso mawaadiniin Soomaaliyeed oo ku xayiran Sucuudiga iyo dalal kale. Sidoo kale Dowladda Fadaraalka Soomaaliya ayaa xaqiijisay in ay la soconeyso xaaladda mawaadiniin ku…
Madaxweynaha JFS Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa wada hadallo kula yeeshay magaalada Addis Ababa ee dalka Itoobiya Madaxweynaha Golaha Midowga Yurub Mudane Charles MICHEL. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo…
Wasaaradda Gaadiidka Somaliya Oo Sheegatay In Dib Loo Soo Celin Doono Xeerkii Waddo Marista gaadiidka
Wasaaradda Gadiidka iyo duulista Hawada ee Xukuumadda Soomaaliya ayaa sheegtay in dhawaan la soo celin doono xeerkii gadiidka ee waddo marista, Wasiirka Wasaaradda Gadiidka Mudane Maxamed Cabdullaahi Salaad Oomaar ayaa sheegtay in la dhameystiray xeerkii waddo…